TARANJA HANDBALL CCOI 2018 : Lavon’ny ekipan’ny St Michel ry zareo Seiseloa
Nosokafana tamin’ny fomba ôfisialy tamin’ny sabotsy 24 Novambra 2018 teo tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina ny fiadiana izay ho tompon-dakan’ny Ranomasimbe Indianina eo amin’ny taranja Handball ho an’ireo klioba tompondaka na ny « Coupes des clubs champions de l’océan Indien ». 26 novembre 2018
Ny Fikambanan’ny Handball aty amin’ny Oseana indianina na « Association Handball océan Indien » na Ahboi izay notarihin’ny filohany Hairoudine Anzizi no nikarakara ity fifaninana ity izay eo ambany fiahian’ny federasiona malagasin’ny Handball. Haharitra herinandro ny fifaninanana ary tsy hifarana raha tsy amin’ny alahady 2 desambra 2018 ho avy izao. Fito ny isan’ireo mpikambana mandrafitra ny Ahboi izay ahitana an’i Madagasikara, Maurice, Comores, La Réunion, Seychelles, Mayottes ary Rodrigues saingy dimy tamin’ireo ihany no nandefa solontena hiatrika ity fifaninanana ity.
Ekipa efatra lahy sy vavy no misolo tena an’i Madagasikara izay ahitana ny Thbc, As Tsiky, Cosfa, ary ny Assm. Toy izao kosa ny voka-dalao tamin’ny fanombohana izay natao tamin’ny sabotsy 24 Novambra lasa teo iny : Asc Tsingoni (Mayotte) sy St Pierre Hbc (La Réunion) nisaraka tamin’ny isa sahala 24 sy 24 ; lavon’ny St Michel (Malagasy) tamin’ ny isa mavesatra 21 noho ny 13 kosa ny ekipa Durantha (Seychelles).
Nilaza ny filoha mpitantana ny Federasiona malagasin’ ny Handball Razafitsalama Aimé Fidèle nandritra ity fanokafana ny lalao ity fa hotolorana mari-pankasitrahana manokana ireo ekipa mendrika amin’ity fifaninana ity ho fampiroboroboana hatrany ny handball aty amin’ny Ranomasimbe Indianina.